विसं २०६७ साल बैशाख ३१ गते मंगलबारको राशिफल कस्तो छ तपाइको भाग्य ?
May 14, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on विसं २०६७ साल बैशाख ३१ गते मंगलबारको राशिफल कस्तो छ तपाइको भाग्य ?
रमाईलो बाताबरणमा आफन्तसँग सहभागि भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिवाद तथा प्रतिष्पर्धामा तपार्ईँकै जित हुनेछ भने सहयोगिको साथ पाइने हुनाले नया प्रकृतिको काम गरि मनग्गे धन तथा सम्पति आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा एककदम अगाडि बढि नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
प्रयन्न गर्दा बिभिन्न अवसरहरु प्राप्त हनेछ भने व्यापार व्यावसायमा लगानी गरि मनग्ने आम्दानी गर्न सकिनेछ । स्कूल कलेज,बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानी बाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ । शेयर बजार तथा सट्टाको व्यावसायमा बिशेष लाभ लिन सकिनेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्नाले सम्बन्ध सुदृड हुनेछ । बिहानको समयमा राजनीति तथा व्यापारीहरुले धेरै समय नखर्चनु नै राम्रो रहनेछ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । सवारि साधन तथा घर जग्गामा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भने सन्तोष जनक आम्दानी हुनेछ । मध्यान्हबाट राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन भन्दा आलोचना बढि सुन्नु पर्नेछ । आमासँग मनमुटाब बड्नेछ । बिद्यामा मिहिनेतनगरे अरुभन्दा पछि परिनेछ भने छाति सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउँनेछ ।
छोटो तथा रमाईलो आन्तरिक यात्राको तय हुनेछ भने सकारात्मक उपलब्धि हात लाग्नेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढ्नेछ भने पति पति बिचको समन्धमा प्रगाडता बढेर जानेछ । उद्योग तथा व्यावसायमा लगानी गरि मनग्गे धन संग्रह गर्न सकिनेछ । खेलकुद तथा यस्तै पराक्रमी क्षेत्रमा समय खर्चिने हरुले नाम तथा दाम कमाउन सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
समयले साथ दिने हुनाले थोरै लगानीबाट भनेजस्तो आम्दानीगर्न सकिने तथा दैनिकि सुधार भएर जानेछ । व्यापारमा लगानी गरि मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । आफन्त तथा सहयोगिको साथ पाइने हुनाले जस्तोसुकै परिस्थितिहरुको पनि सामना गर्न सहज बाताबरण बनेर जानेछ । पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिदापनि नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । प्रेम प्रशङगमा रमाउँन चाहनेहरुका लागि लामो समय सँगै बसेर भलाकुसारि गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
शुभचिन्तकको सहयोगले चिताएको कामहरु सम्पादन हुनेछन् । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले चाहेजस्तो नतिजा ल्याउँन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दा मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक स्थिति सुदृड हुनेछ । बिहानको समयमा विदेश यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि समय उत्तम रहेनेछ ।
माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय मध्ययम रहेकोछ । लामो दुरिको वैदेशिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने विदेशमा श्रम गर्नेहरुले मनग्गे धन तथा सम्पति जोड्न सक्नेछन् । मध्यान्हबाट व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने बिदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार बाट भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा मन सुधार हुँदै जानेछ भने आफन्त तथा सहयोगिहरुको सहयोगले शरीरमा थप उर्जा बढ्नेछ ।
थिभाई तथा नातागोताबाट सहयोग पाइने हुनाले हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन जोड्न सकिनेछ । माया प्रेममा आत्मियता बढ्नेछ भने पतिपत्निबिच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक धन तथा सरकारि सम्पति प्रयोग गरि आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा प्रतिस्पर्धिहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
नयाँकाम पाउने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेकोछ । राजनीति तथा समाजसेवीहरुले राज्यबाट लाभ पाउने समय रहेकोछ भने व्यापारमा समय लगानी गर्नेहरुले मनग्गे धन कमाउन सक्नेछन् । बुवा तथा बुवा सरहका मानिसबाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुनेछ भने आफन्त तथा सहयोगिहरुले तपार्ईँकै साथ दिनेछन् । माया प्रेमको बन्धन कसिने तथा पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजाको साथ पुरस्कार जित्न सकिनेछ ।
अरुलाई सजिलै प्रभावमा पारेर काम लिन सकिनेछ भने समाजमा जनताको काम गर्न सक्दा मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । भाग्यले साथ दिने हुनाले व्यापार व्यावसायमा थोरै समय लगानी गर्दापनि प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको अध्ययन यात्रा हुनेछ । सरकारि स्तरमा तपार्ईँको प्रभाव बढ्ने हुनाले समयमा कामहरु बन्नेछन् । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नु पर्नेछ ।
स्वास्थ्य सबल हुनेहुँदा उपलब्धिमुलक कामहरु गरेर दैनिकी जीवन फेरिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा गरिएको लगानी बाट भनजस्तो नतिजा आउँने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले दिदिबहिनीसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ ।
व्यापार व्यावसायमा लगानी बढाई आम्दानीका स्रोतहरु पढाउँन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा मानव निर्मीत वस्तुहरु प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ । लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रहरुसँग भेट हुनेछ । माया प्रेममा आत्मियताको बढोत्तरि हुनेछ भने रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । बिद्यार्थीहरुले अध्ययनमा सफलता पाउँनेछन् । गुरुहरुको राम्रो सहयोग पाइने हुँदा गन्तब्य पहिल्याउँन सहज हुनेछ ।
ऐश्वर्यालाई मात ख्वाउने यी इरानी मोडल ऐश्वर्याभन्दा पनि ‘हट’ छिन् (फोटोफिचर)
बीपी राजमार्गको रिठ्ठेभिरमा किन टाँसियो हजार बढी ऐना ?
तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस आजको राशिफल २०७५ कात्र्तिक २३ गते शुक्रबार
November 9, 2018 December 18, 2018 अखवार अनलाइन
रुविना र एलिसाले लगातार ४० घण्टा नृत्य गरेर रेकर्ड राख्ने
May 17, 2019 अखवार अनलाइन
मोरङमा भैसी बलात्कार, ४० बर्षीया पुरुष पक्राउ
May 5, 2019 अखवार अनलाइन
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन माग
July 27, 2019 अखवार अनलाइन
त्रिविले खारेज गर्‍यो दुई जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र
July 25, 2019 अखवार अनलाइन
सुजनको अभिनय रहेको ‘लुकी लुकी’ गीतको भिडियो सार्वजनिक, भिडियोमा सुजन र विमलाको अभिनय (भिडियो सहित)
बुढाे बिदेश बुढी भतिजाेलाई राती राती बाेलार रातभर मस्ती, दुवैको रामधुलाइ (भिडियो सहित)
‘उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई एक नम्बरका गफाडी हुन’ पूर्वसांसद खतिवडा
पर्यटन बर्षलाई लक्षित गर्दै सुरेश मगरका २ वटा गित आउदै, गोक्यो क्षेत्रमा छायाँकन
श्रीमान भारतमा श्रीमती सुन र नगद लिएर आफ्नै भतिजसँग टाप
वि.सं.२०७६ भदौ २७ गते शुक्रबारको राशिफल, हेुर्नहोस कस्तो छ तपाइको आजको भाग्य
महिला सशक्तिकरण अभियानमा जुटदै निरा गृहिणी समाज
स्कुटरमा १३ लाख नगद र ४१ लाखको चेक बरामद
सोह्र श्राद्धका लागि मुक्तिनाथमा चहलपहल